गृह - विश्व स्विट्जरल्याण्डको विश्वव्यापी चर्च
हामी ख्रीष्ट को शरीर को हिस्सा हो र हामी सुसमाचार, येशू ख्रीष्ट को सुसमाचार प्रचार गर्न को लागी एक मिशन छ। शुभ समाचार के हो? परमेश्वरले येशू ख्रीष्टको माध्यमबाट संसारलाई आफूसँग मिलाउनुभएको छ र सबै मानिसहरुलाई पापहरुको क्षमा र अनन्त जीवन प्रदान गर्दछ। येशूको मृत्यु र पुनरुत्थानले हामीलाई उहाँको लागि बाँच्न, उहाँलाई हाम्रो जीवन सुम्पन र उहाँको अनुसरण गर्न प्रेरित गर्दछ। हामी तपाईंलाई येशूका चेलाहरु को रूप मा बाँच्न, येशू बाट सिक्न, उहाँको उदाहरण पछ्याउन र ख्रीष्टको अनुग्रह र ज्ञान मा बढ्न मद्दत गर्न पाउँदा खुसी छौं। लेख संग हामी बुझ्ने, अभिमुखीकरण र झूटा मूल्यहरु द्वारा आकार एक बेचैन संसारमा जीवन समर्थन मा पास गर्न चाहन्छौं। के यो पहिलो पटक तपाइँ भगवान को विश्वव्यापी चर्च (स्विट्जरल्याण्ड) लाई सम्पर्क गर्नुभयो? हामी तपाईंलाई थाहा पाउन को लागी तत्पर छौं!
हाम्रो सित्तै सदस्यता अर्डर गर्नुहोस्
पत्रिका OC फोकस येशू »
शनिबार हुन्छ अक्टोबर २२, २००, um १ U Uhr, ikdiker-Huus मा 8142 Uitikon मा।
यदि तपाइँसँग प्रश्नहरू छन् भने हामीलाई लेख्नुहोस्! हामी तपाईंको निपटानमा छौं!
भगवानको अनुग्रह भविष्य सबैको लागी
पेन्टेकोस्टको सार्थक चाडले हामीलाई सम्झाउँछ कि पहिलो क्रिश्चियन चर्च पवित्र आत्मा संग छापिएको थियो। पवित्र आत्मा तब देखि विश्वासीहरु र हामीलाई साँच्चै नयाँ पहिचान दिनुभयो। म आज यो नयाँ पहिचान को बारे मा कुरा गर्दैछु। केहि मानिसहरु आफैलाई प्रश्न सोध्छन्: के म भगवान को आवाज, येशू को आवाज, वा पवित्र आत्मा को गवाही सुन्न सक्छु? हामी रोमी मा एउटा जवाफ पाउँछौं: «तिमीले बन्धन को भावना पाएका छैनौ कि तपाइँ फेरि डराउनु पर्छ; तर तपाइँ बचपन को एक आत्मा प्राप्त गर्नुभयो जसको माध्यम बाट हामी रोयौं: अब्बा, प्रिय बुबा! भगवान को आत्मा आफै हाम्रो मानव आत्मा को साक्षी दिन्छ ...
येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान भनेको जीवनको पुनर्स्थापना हो। येशूको पुनर्स्थापित जीवनले तपाईंको दैनिक जीवनलाई कसरी असर गर्दछ? कलस्सीहरूलाई लेखेको पत्रमा पावलले एउटा नयाँ रहस्य प्रकट गरे जसले तपाईंको जीवनमा नयाँ जीवन दिन सक्छ: “तपाईंले संसारको शुरूदेखि नै के सिक्नुभयो, हो, सारा मानवताबाट के लुकेको थियो, त्यो रहस्य जुन अब प्रकट भएको छ। सबै इसाईहरुलाई। यो एक अतुलनीय चमत्कारको बारेमा हो जुन पृथ्वीमा भएका सबै मानिसहरुका लागि भगवानले राख्नु भएको छ। तपाईं ईश्वरका हरूलाई यो रहस्य बुझ्नको लागि अनुमति छ। यो लेखिएको छ: ख्रीष्ट तपाईंभित्र बास गर्नुहुन्छ! र यसैले तपाईंसँग दृढ आशा छ कि परमेश्वरले तपाईंलाई उहाँको महिमामा भाग दिनुहुनेछ ”(कल १,२1,26-२27 ...
तपाईंको वर्तमान जीवन अवस्था कस्तो छ? के तपाईं जीवनमा बोझ बोक्नुहुन्छ जुन तपाईंलाई तौल गर्दछ र तपाईंलाई विपत्ति दिन्छ? के तपाईंले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्नुभयो र तपाईंले गर्न सक्नुहुने सीमामा पुग्नुभयो? तपाईको जीवनले तपाईलाई अहिले अनुभव गरेको अनुभवले तपाईलाई थकित पार्छ, यद्यपि तपाई गहिरो आरामको चाह गर्नुहुन्छ, तपाईले कुनै पाउन सक्नुहुन्न। येशूले तपाईंलाई उहाँतर्फ बोलाउन आह्वान गर्नुभयो: “हे सबै मानिस जो ममाथि आक्रोश र बोझले दबिएका हो! म तपाईंलाई स्फूर्ति दिन चाहन्छु। मेरो जुवा तिमी आफैले बोक, र मबाट सिक। किनकि म विनम्र र विनम्र हृदयको छु। त्यसोभए तपाईंले आफ्नो प्राणको लागि विश्राम पाउनुहुनेछ। किनकि मेरो जुवा कोमल छ र मेरो भारी हलुका छ »(मत्ती ११: २ 11,28--30०) येशूले आफ्नो अपील मार्फत हामीलाई के आदेश दिनुहुन्छ? ऊ ...
"सफलता" म्याग्जिन पत्रिका IN फोकस येशू » WKG CURRICULUM
म तपाइँलाई एक महत्त्वपूर्ण प्रश्नको साथ फर्काउँछु: तपाईं गैर-विश्वासीहरूको बारेमा के सोच्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ कि यो एक प्रश्न हो हामीले सबैले सोच्नु पर्छ! अमेरिकाको जेल फेलोशिप र ब्रेकपॉइन्ट रेडियो कार्यक्रमका संस्थापक चक कोल्सनले एक पटक यस प्रश्नको उत्तर दिए: “यदि अन्धा मान्छेले तपाईंको खुट्टामा पैदल हिर्काउँदछ वा तपाईंको शर्टमा तातो कफी राख्छ भने, के तिमी उसै पागल हुन्छौ? ऊ आफैंले जवाफ दियो कि यो सायद हामी नहुने हो, किनकि अन्धो मान्छेले उसको अगाडि के देख्न सक्दैन। कृपया यो पनि याद राख्नुहोस् कि ती मानिसहरू जसलाई अहिलेसम्म ख्रीष्टमा विश्वास गर्न बोलाइएको छैन उनीहरूले उनीहरूको आँखाको अगाडि सत्यता देख्न सक्दैनन्। को कारण ...
तपाईंलाई थाहा छ सुसमाचार राम्रो समाचार हो। तर के तपाई वास्तवमै यसलाई राम्रो समाचार मान्नुहुन्छ? तपाईं धेरैलाई जस्तै, मलाई मेरो जीवनको ठूलो अंशको लागि सिकाइएको छ जुन हामी आखिरी दिनमा बाँचिरहेका छौं। यसले मलाई एउटा विश्व दृश्य दियो जुन चीजहरूलाई परिप्रेक्ष्यमा हेरे जुन संसारको अन्त्य हुने छ जुन हामीलाई थाहा छ आज केहि छोटो वर्षहरूमा आउँछ। तर यदि मैले सोही अनुसार व्यवहार गरें भने, म महासulation्कष्टबाट बच्न सक्नेछु। धन्यबाद, यो अब मेरो इसाई विश्वासको केन्द्रबिन्दु होईन वा परमेश्वरसँगको मेरो सम्बन्धको आधार हो। तर जब तपाईं यति लामो समय सम्म केहि विश्वास गर्नुहुन्छ, यो गाह्रो छ ...
म एक दुर्व्यसनी हुँ भनेर स्वीकार्न यो मेरो लागि धेरै गाह्रो छ। मेरो सम्पूर्ण जीवनमा म आफैंमा र म वरपरका मानिसहरुलाई झुठो बोलेको छु। बाटोमा, म धेरै दुर्व्यसनीहरू भेट्टाएको छु जो मदिरा, कोकेन, हेरोइन, गाँजा, तंबाकू, फेसबुक, र अन्य धेरै लागूपदार्थको लागी विभिन्न चीजहरुमा लत छन्। भाग्यवस, एक दिन म सत्यको सामना गर्न सक्षम भएँ। म आदी छु। मलाई सहयोग चाहियो! मैले अवलोकन गरेका सबै मानिसहरूका लागि नशाको नतिजा सँधै समान हुन्छन्। तपाईंको शरीर र तपाईंको जीवन अवस्था बिग्रन थाल्छ। दुर्व्यसनीहरुको सम्बन्ध पूर्ण रूपमा ध्वस्त भयो। केवल साथीहरु लाई नशा गर्न छोडियो ...
लेख «अनुग्रह समुदाय» "बाइबल" IF जीवनको वचन »